I-ATTO izakubonisa iMveliso eNtsha yoQhagamshelo lweMveliso @IBCShow -NAB Bonisa iiNdaba ngoSasazo lweBeat, Umsasazi waseburhulumenteni weNAB Show-NAB BONISA LULA
ikhaya » Okufumaneka » I-ATTO izakubonisa iMveliso eNtsha yoQhagamshelo lweMveliso @IBCShow
Unxibelelwano yinto ebalulekileyo kwithemba lokusebenza ngempumelelo kwetekhnoloji. Oku kunokuba yinto ebaluleke ngakumbi ngotshintsho oluqhubekayo lokuba inkcubeko yedatha yethu yedijithali eqhubeka okwangoku xa ulawulo kunye nokugcinwa kudlala indima ebaluleke kakhulu ekuphatheni idatha. Ngaphezulu inani ledatha liya kuqhubeka lisanda ngokukhawuleza, ke ngoko yenza indlela kunye nemfuno yendlela egcinwa kwaye ihanjiswe ngayo. I-Atto's Isimangalo senkampani sithi "Amandla aBangela ukuGcina," kwaye ubukhulu becala, iphila ngokuhambelana nesiqubulo. Ukusukela ngohlobo lwayo ngoNovemba we1988, ATTO Technology ihambise ngempumelelo isisombululo esisekupheleni kwesiphelo sokugcina, ukulawula kunye nokuhambisa idatha.
Ukuba ngumvelisi wee-adapter, iiadaptha zenethiwekhi, abalawuli bokugcina, kunye neeadaptha zeThunderboltTM, i-ATTO ayikaze isilele ukubonelela ngamanqanaba aphezulu oxhulumaniso kuzo zonke iindawo zokugcina, kubandakanya isikhululo seFibre, i-SAS, i-SATA, iSCSI, i-Ethernet, i-NVMe kunye ne-Thunderbolt. Ukuba kukho nayiphi na inkampani enokuphila ngokuthunyelwa kwayo ngokuphumelela ngakumbi kuneli buchwephesha lobuchwephesha, ngoko i-ATTO yeyona nto inamandla "ukuBamba ukuGcina." IBC 2019 Ingqungquthela engaphantsi kwenyanga kude, i-ATTO iya kubonisa ngakumbi ukuba kutheni benokuthi bahlangabezane ne-4K kunye ne-8K ividiyo yokuqhagamshelwa kokudibeneyo kwiimfuno kulo lonke ugcino kunye neentlobo zenethiwekhi xa ibonisa ezimbini zemveliso yokuqhagamshela entsha kakhulu kunye neyona mveliso. Ezi mveliso zisandula ukuziswa ziya kuqinisa ngakumbi ukuba kutheni le nkampani ikwazile ukugqobhoza i-IT kunye nemithombo yeendaba kunye neendlela zokuzonwabisa ngaphandle kwento entsha yokuvelisa ubugcisa kunye nokukhula okuqhubekayo kolawulo lweenkcukacha nokugcinwa kwedatha.
I-ThunderLink NS 3252 iThunderbolt 3 ukuya kwi-25Gb kunye ne-ATTO 360 Yenza ityala labo e-BC 2019
Ukuza kuthi ga ngoku, konke Iimveliso zeThuli zeThunderbolt babonakalise ubuchule babo bokusebenzisa ngokupheleleyo itekhnoloji yokuhambisa idatha ephezulu, esebenza ukuphucula ngokupheleleyo iinkqubo ze-CPU ukuhambisa udluliso oluthembekileyo nolunokuthenjwa kwedatha ngentsebenzo ephezulu kakhulu engaguqukiyo. Ngoku, ngokutyhilwa okusha ThunderLink NS 3252 Thunderbolt 3 to 25Gb, Iingcali zezobugcisa ziya kumangaliswa kukwazi ukuba yintoni na isandisi-lizwi esinxibelelanisayo esibalaseleyo esenza ngokungaphaya kokubonakalayo okubonelela ngokuguquguquka okumangalisayo kunye nokunxibelelana okunobungozi kwiindawo eziphakamileyo zokudala umxholo wobubanzi. Izakusebenza njengomnxibelelanisi omkhulu wokunxibelelanisa kwisaziso esandula ukubhengezwa iMac Pro®, i I-Apple Mac Pro®, yaye IMac mini®. Le mveliso intsha yeThunderbolt ikwanaso nesibonelelo sokumiselwa kwezinto ezibini ezihambelanayo, ifom yeprofayili ephantsi, kunye nokudibana kweThunderbolt 3. I-Atto ThunderLink® NS 3252 25GbE i-adaptha ye-bandwidth yamandla okuxhasa ukuhanjiswa kwefayile yevidiyo ye-4K kunye nokuboniswa kwinqanaba elifanayo kunye nokufakwa kwiimodyuli ezixhasayo ze-SFP28. Kwakhona ukwaziswa kwi-IBC 2019, iya kuba yiyo I-ATTO 360 Tuning, ukuJonga kunye nokuHlaziya iSoftware, esisixhobo senjongo-ye-Ethernet sokwenza umsebenzi womnatha, ojolise ekuvuleleni amandla okwenyani e-ATTO UkukhawulezaFrameTM kunye neeadaptha zeThunderLink.
Yintoni enokulindeleka kwi-ATTO kwi-IBC 2019
Uphuhliso loShishino lweHlabathi, iTekhnoloji yeMidiya kwi-ATTO Technology, Inc.
Ngezi mveliso zimbini zimangalisayo kwiiveki nje ezingatyhilelwanga, akukho mathandabuzo ukuba ingaba i-ATTO izokwazi ukuhambisa isikhombisi solawulo olusebenzayo xa ingaphezulu kombuzo wokuba njani. Impendulo ilula, kwaye inombulelo kubuchwephesha benkampani ekugcinweni kwinethiwekhi, kunye nokukwazi kwabo ukudibanisa zonke izixhobo kunye nobuchule bokulahla iqela elinobuchule obunjineli elinetalente. Umbono wethemba lokutyhileka kwaxhaswa ngakumbi yi Jeff Lowe osebenza kuphuhliso loShishino, iiTekhnoloji zeMidiya kwi-ATTO. Lowe utshilo "Iimveliso ezintsha esibonisa ngazo kwi-IBC kulo nyaka ziziphumo zokunikezelwa kweNtengiso yeendaba neMithombo yeendaba ngaphezulu kweminyaka engamashumi amathathu," Abasasazi bayazi ukuba iingcali zoqhakamshelwano njenge-ATTO ziyayiqonda imisebenzi yazo eyahlukileyo kwaye ziyakwazi ukubonelela ngezona zisombululo zichanekileyo. " Akukho mathandabuzo ekuzithembeni kweLowe kule Septemba izayo xa i-ATTO iphinda ibonise amandla eemveliso zabo kunye nendlela abanokuthi babonise ngayo amandla othungelwano lwemeko yendawo kunye nokugcinwa konxibelelwano.
Ingqungquthela ye-IBC 2019 iya kubanjwa ngoSeptemba 13-17 ngelo xesha Iziko leNgqungquthela yeRAI Amsterdam e-Amsterdam, eNetherlands, kunye nomboniso weTekhnoloji ye-ATTO uza kubanjwa 7.A26. Bonke abo bezayo bayakhuthazeka ukubhalisa kwi-IBC 2019 kwangoko.
Ngolwazi oluthe kratya malunga nendlela i-ATTO enokusebenza ngayo ukubonelela ngokusebenza ngokugqibeleleyo kokusebenza, jonga ngoku: www.atto.com ube nokuqonda okungcono ukuba kutheni kule minyaka ingamashumi amathathu idlulileyo, baphumelele njengenkokheli ye-network kunye nogcino lonxibelelwano, kunye nokukwazi ukuphumeza izisombululo zeziseko zekhomputha ezikwidatha.
I-ATTO 360 ATTO Technology CES2017 idata Ukuphathwa kweedatha Ukugcinwa kwedatha Digital Nirvana YE UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli IBC ibc 2019 Jeff Lowe kuhlolwa kweendaba MStar SoftAtHome Iintetho kunye nemisrya yoGcino Umxholo ophantsi weendudumo Ibingu TVU Networks Iinkqubo ezahlukeneyo ndiphila	2019-08-21
Previous: I-NAB bonisa iNew York: Ukuqokelelwa ngokugqibeleleyo kwabaFundi
next: UArgosy ubhengeza iinethiwekhi ze-IP kunye neeWindows zeSiseko seFibre